प्रधानमन्त्री ओलीले भनेको 'ड्रोन' प्रविधि के हो ? कसरी काम गर्छ ? जान्नुहोस् बिस्तृतमा - Technology Khabar
» प्रधानमन्त्री ओलीले भनेको ‘ड्रोन’ प्रविधि के हो ? कसरी काम गर्छ ? जान्नुहोस् बिस्तृतमा
प्रधानमन्त्री ओलीले भनेको ‘ड्रोन’ प्रविधि के हो ? कसरी काम गर्छ ? जान्नुहोस् बिस्तृतमा
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकाल भन्दा अगाडी मानिसहरुले ड्रोन नाम समेत नसुनेको बताएसँगै ड्रोन चर्चामा आएको छ । उनले आइतवार बालुवाटारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, ‘यो कार्यकालभन्दा अगाडि साधारणतया भन्ने हो भने ड्रोन मान्छेले सुनेका पनि थिएनन् होला, आज तपाईँहरु सबैले ड्रोन जान्नुहुन्छ, धेरैले चलाउनुहुन्छ ।’
हामी यहाँ ड्रोन प्रविधि र त्यसको बारेमा केहि जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौं ।
ड्रोन भनेको चालक रहित विमान हो । जसमा क्यामरा जडान गरिन्छ र उक्त क्यामरा तस्वीर तथा भिडियोका लागि प्रयोग गरिन्छ। त्यसैगरि ड्रोन हाल सामान ढुवानीका साथै यातायातको साधनको रुपमा पनि प्रयोगको लागि विश्वभर परीक्षण हुँदैछ ।
‘ड्रोन’ भन्ने शब्द बेलायती रानी माहुरीको नाममा राखिएको हो । अंग्रेजीमा बेलायती रानी माहुरीलाई ड्रोन भनिन्छ । रानी माहुरीले अन्य कामदार माहुरीसँग मिलेर मात्र काम गर्ने गर्दछ र यसैगरि ड्रोनका लागि पनि एउटा छुट्टै पाइलटको आवश्यक पर्दछ । त्यसैले रानी माहुरी जस्तै काम गर्ने हुँदा त्यसलाई सहजरुपमा ड्रोन भनिएको हो ।
विश्वभर ड्रोनको प्रयोग विभिन्न कार्यमा हुने गरेको छ । धेरै जसो भिडियो र फोटो खिच्न ड्रोन उडाउन थालिएको छ । विभिन्न देशहरुमा ड्रोन उडानको लागि फरक फरक नियम कानूनहरु रहेका छन् । नेपालमा भने ड्रोन उडान अनुमति सहज छैन । ड्रोन आयात र खरिद सहज भएपनि उडानको लागि भने अनुमति लिनुपर्दछ ।
यसलाई रिमोट कन्ट्रोलबाट जमिनमै बसेर आफूले चाहेको क्षेत्रमा उडाएर यसमा जडित क्यामरामार्फत तस्बीर तथा भिडियो खिच्न सकिन्छ । यस्तो क्यामरालाई मोबाइल वा ट्याबलेटमार्फत नियन्त्रणमा राखेर चाहेको ठाउँको तस्बीर वा भिडियो लिन सकिन्छ ।
ड्रोन क्यामेराले जमिनको ठूलो क्षेत्रको तस्बिर लिन सकिन्छ जुन सामान्य डिजिटल वा एसएलआर क्यामेराबाट सम्भव हुँदैन । यो क्यामराले आफू जान नसक्ने ठाउँको तस्बीर वा भिडियो लिन सकिन्छ । पुग्न सम्भव भएसम्मको ठाउँमा पुगेर त्यहाँबाट क्यामेरा उडाउँदै आफूले चाहेको क्षेत्रसम्म उडाएर तस्बीर तथा भिडियो लिन मिल्छ । यो ड्रोन जासुसीका लागि पनि प्रयोग गरिन्छ ।
ड्रोन क्यामरा अनुमति बिना प्रयोग गर्न पाइँदैन । २०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि विदेशी पत्रकार, चलचित्र निर्माता तथा विभिन्न व्यक्तिले ड्रोन क्यामराको प्रयोग गरेका थिए ।
रेडियो फ्रिक्वेन्सी तथा जिपिएस मार्फत रिमोड कन्ट्रोलबाट क्यामरालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यसलाई पहिले सैन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिने भएपनि अहिले व्यक्तिगत रुपमा पनि प्रयोग गर्न थालिएको हो ।
सरकारले यससम्बन्धी कार्यविधि (अनम्यान्डेड एरियल भेइकल फ्लाइट प्रोसेड्युर) जारी गरेर ड्रोन चलाउनका लागि अनुमति लिनै पर्ने व्यवस्था गरेको छ । शान्ति, सुरक्षा तथा व्यक्तिको गोपनियता भंग हुने गरी यसको प्रयोग गर्न पाइँदैन । अनुमति लिनका लागि आफूले प्रयोग गर्ने ड्रोन क्यामराको विस्तृत विवरण पेश गर्नुपर्छ ।
नेपालसहित विश्व बजारमा विभिन्न आकार प्रकार र डिजाइनमा ड्रोनहरु किन्न सकिन्छ । यसको प्रयोगको उद्धेश्यले ड्रोन खरिद गर्न सकिन्छ ।
विकसित मुलुकहरुमा सैन्य प्रायोजन ड्रोन मार्फत नै बम तथा हवाई आक्रमणहरु समेत गर्ने गरिएको छ ।
त्यसैगरि पछिल्ला वर्षहरुमा अन्तराष्ट्रिय हवाई उडानको लागि ड्रोनको प्रयोग बारे अनुसन्धान तथा परिक्षणहरु भईरहेका छन् । जसलाई अनम्यान्ड भेहिकल वा एयर ट्याक्सी भन्ने गरिएको छ ।
केहि समयअघि नासाले मंगल ग्रहमा समेत सानो ड्रोन हेलिकप्टर इन्जेनुइटी उडाउन सफल भएको थियो ।
नेपालमा ड्रोन उडानको नियम
नेपालमा ड्रोन उडाउन धेरै निकायको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । ड्रोन उडाउन पर्यटन मन्त्रालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, सञ्चार मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ ।
२०७२ सालमा जारी भएको ड्रोन उडान कार्यविधिमा धार्मिक तथा सांस्कृति सम्पदा, सुरक्षा संवेदनशील स्थान र हवाई मार्गमा असर गर्न तथा व्यक्तिगत गोपिनीयतामा असर गर्नै गरी पनि उडान गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
अनुमति लिने व्यक्ति वा संस्थाले ड्रानेको विवरण, उद्देश्य, उडान सयमको अनिर्वाय विवरण सम्बन्धि सबै निकायमा पेस गर्नैपर्ने हुन्छ । सुरक्षा निकाय तथा संवेदनशील क्षेत्रको एक किलोमिटर क्षेत्रमा पनि उडान गर्न पाइने छैन ।
स्थानीय प्रशासनको रोहवरमा मात्रै उडान गर्नपर्ने व्यवस्था छ । आईकाओले प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा नेपालका समेत ड्रोन उडानमा प्रतिबन्ध लाग्नेछ । यसरी हुने अनुमतिमा लागि प्राधिकरणले अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । ड्राने प्राधिरकरणले तोकेको चार किल्लाभन्दा अन्य स्थानमा पनि उडान गर्न पाइने छैन ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ड्रोनको भारवहन क्षमता प्रामाणित भएपछि दुई सय ग्राम सम्मको मात्रैले उडान गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
उडान समय १५ मिनेट, उडान ३ सय मिटरको आसपारमा एक सय मिटर उचाइसम्ममा मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारी नियममा छ । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको ५ किलोमिटरसम्म पनि ड्रोन उडान नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
अनुमति कहाँ र कसरी लिने
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण स्वीकृतिपत्र तथा व्यवसायी प्रयोजनको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले ड्रोन उडान सिफारिस गरेको पत्रसाथ व्यक्ति वा संस्थाले लिखित निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।
निवेदन दिनेले प्राधिकरण तथा गृहले जारी गरेको सम्पूर्ण मापदण्ड पालना गर्र्न सहमति हुनुपर्छ । अनुमति अनुसार काम भए नभएको अनुगमन गर्न गृहले कर्मचारी नै खटाउनेछ ।
यसरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएको अवस्थामा गृह मन्त्रालय, सुरक्षा समन्वय महाशाखाले उडान अनुमति दिन वा सुरक्षा निकायलाई अनुमति दिन निर्देशन दिने व्यवस्था छ ।
उडानमा अन्तरसरकारी निकाय र नीतिले नेपालमा ड्रोन क्यामेरा उडान झन्झटिलो बनेको छ । सरकारले भूकम्प लगत्तै ड्रोन उडानसम्बन्धी कार्यविधि २०७२ जारी गरेको थियो ।
पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार पुरातात्विक सम्पदा, विमानस्थल, देशको सीमा तथा सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको ठाउँमा ड्रोन उडाउन पाइँदैन । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई उडानमा असर नगर्ने गरी सम्बन्धित निकायको अनुमति तथा स्वीकृतीको आधारमा मात्र उडान अनुमति दिने गर्दछ ।
नोकियाका फोनहरु सार्वजनिक, यस्तो छ ‘नोकिया ३३१०’ फोन